Enweghị njem nleta, enweghị COVID, mana enwere onwe ya n'ikpeazụ: Republic of Nauru
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Nauru Nauru » Enweghị njem nleta, enweghị COVID, mana enwere onwe ya n'ikpeazụ: Republic of Nauru
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ Nauru Nauru • News • ndị mmadụ • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Enweghị ọtụtụ ebe fọdụrụ n'ụwa a, ebe COVID na -enwebeghị nsogbu, yana COVID enweghị. Otu bụ Island Republic of Nauru.
Nauru ka bụ ihe na -adịghị mkpa maka njem njem mba ofesi.
Nauru bụ obere agwaetiti na mba nweere onwe ha na ugwu ọwụwa anyanwụ Australia. Ọ dị kilomita iri anọ na abụọ na ndịda ọdịda anyanwụ, okirikiri coral gbara agwaetiti a gburugburu nke nwere oke ntụtụ.
Onu ogugu ndi mmadu-ihe dika 10,000 tinyere onu ogugu ndi Nauru. 1,000
Enweghị ikpe Coronavirus na mba ahụ, mana gọọmentị US na -atụ aro ka a gbaa ọgwụ mgbochi mgbe ị na -aga Nauru
Mgbe ị na -enyocha ọnụ ọgụgụ ụwa na Coronavirus, otu mba nweere onwe ya na -efu mgbe niile. Obodo a bụ Republic of Nauru. Nauru bụ mba agwaetiti dị na Oke Osimiri Pasifik
Ndị Nauru nwere agbụrụ iri na abụọ, dị ka akara nke kpakpando nwere akara iri na abụọ nọ na ọkọlọtọ Nauru, ma kwenyere na ọ bụ ngwakọta nke Micronesian, Polynesian, na Melanesian. Asụsụ ala nna ha bụ Nauruan mana a na -asụ Bekee ebe a na -eji ya maka ebumnuche gọọmentị na azụmahịa. Agbụrụ ọbụla nwere onyeisi nke ya.
Republic nke Nauru
Ọkọlọtọ Nauru dị nfe ma dịkwa larịị, nwere agba Navy Blue, Yellow, na White. Agba ọ bụla nwere ihe ọ pụtara. Navy Navy na -anọchite anya oke osimiri gbara Nauru gburugburu. Ahịrị edo edo dị n'etiti Equator n'ihi na Nauru dị n'akụkụ Equator na ọ bụ ya mere Nauru ji na -ekpo oke ọkụ. Kpakpando na -acha ọcha 12 na -anọchite anya ebo 12 nke ndị Nauru.
Ọ bụ ya mere e ji acha ọkọlọtọ Nauruan dị ka nke a.
Mweghachi nke igwupụta phosphate na mbupụ na 2005 nyere akụnụba Nauru nkwalite dị oke mkpa. Nkwụnye nke abụọ nke phosphate nwere atụmatụ ndụ fọdụrụ n'ihe dị ka afọ 30.
Achọpụtara nnukwu ego nke phosphate na 1900 na 1907 ụlọ ọrụ Pacific Phosphate butere mbubata phosphate mbụ na Australia. Ruo taa, igwu ala phosphate ka bụ isi ebe Nauru si enweta ego.
Jenụwarị 31 bụ ụbọchị nnwere onwe (si na ncheta Truk)
Gọọmentị na -eme ememme ụbọchị mba a, na -ahazi egwuregwu na asọmpi egwu maka ngalaba na ngwa ọrụ gọọmentị dị iche iche. Ọzọkwa, enwere oriri maka ndị na -eto eto n'obi. (Ọkachasị ndị lanarịrị Truk)
Mee 17 bụ Mee Ụbọchị Ọchịchị
Agwaetiti a niile na -eme emume a nwere asọmpi egwu na asọmpi n'etiti mpaghara 5.
1st Julaị bụ NPC/RONPhos Handover
Nauru Phosphate Corporation weghaara phosphate na mbupu na Nauru mgbe ịzụrụ ya n'aka British Phosphate Commission. Mgbe ahụ RONPhos weghaara NPC na 2008.
Ọktoba 26 bụ ụbọchị ANGAM
Angam pụtara ịbata n'ụlọ. Ụbọchị mba a na -echeta nloghachi nke ndị Nauru site na mbibi. Obodo ọ bụla na -ahazi mmemme nke ya makana a na -esokarị ndị ezinụlọ na ndị ha hụrụ n'anya eme emume a.
Mgbe a mụrụ nwa, ọ ga -eketa ebo ha site n'akụkụ nne ha. Uwe maka ebo ọ bụla dị iche iche na -enyere aka ịmata onye ọ bụla.
Ndepụta ebo 12 Nauru:
Eamwit - agwọ/eel, aghụghọ, na -amị amị, dị mma n'ịgha ụgha na onye na -edepụta ụdị.
Eamwitmwit - cricket/ahụhụ, mara mma efu, ịdị ọcha, nwere mkpọtụ na -eme mkpọtụ na otu.
Eaoru - onye nbibi, na -emebi atụmatụ, ụdị ekworo.
Iruwa - onye bịara abịa, onye mba ọzọ, onye si mba ọzọ, nwere ọgụgụ isi, mara mma, oke.
Eano - kwụ ọtọ, na -agba ara, na -achọsi ike.
Iwi - lice (anwụọla).
Irutsi - iri anụ mmadụ (enweghịzi ike).
Deiboe - obere azụ ojii, nwere nkụda mmụọ, aghụghọ, omume nwere ike ịgbanwe oge ọ bụla.
Ranibok - ihe asachapụrụ n'ikpere mmiri.
Emea - onye na -eji rake, ohu, ahụike, ntutu mara mma, na -aghọ aghụghọ na ọbụbụenyi.
Emangum - onye ọkpụkpọ, onye na -eme ihe nkiri
Maka ngwa visa niile gụnyere ndị ọrụ mgbasa ozi na -eleta, ekwesịrị iziga arịrịọ email ịbanye Nauru na mbata na ọpụpụ Nauru.
Dollar Australia bụ ihe iwu kwadoro na Nauru. Mgbanwe mba ofesi na ụzọ ọ bụla ga -esi ike. Ego nkịtị bụ naanị ụdị ịkwụ ụgwọ na Nauru.
A naghị anabata kaadị kredit/debit.
Enwere ụlọ oriri abụọ, nke gọọmentị nwere na ụlọ ezinaụlọ nwere.
Enwere nhọrọ ụlọ abụọ ọzọ (ụdị otu) nkeonwe.
Ọ bụ oge ọkọchị na Nauru, n'ogo dị elu nke 20s-n'etiti 30s. A na -atụ aro uwe oge anwụ.
A na -anabata akwa oge anwụ/iyi nkịtị mana ọ bụrụ na ị na -eme nhọpụta na ndị ọrụ gọọmentị ma ọ bụ ịga ọrụ ụka, a na -atụ aro ka ị jiri ejiji dị mma. Isu mmiri abụghị ihe a na -ahụkarị na Nauru, ndị na -egwu mmiri nwere ike na -eyi uwe elu n'elu ha ma ọ bụ uwe mkpụmkpụ.
Enweghị ụgbọ njem ọha. Akwadoro ụgwọ ụgbọ ala.
Osisi mkpụrụ osisi bụ aki oyibo, mango, pawpaw, wayo, mkpụrụ osisi achịcha, ofe gbara ụka, pandanus. Osisi siri ike nke ụmụ amaala bụ osisi tomano.
Enwere osisi/osisi ifuru dị iche iche mana ihe kacha eji eme ihe/kacha amasị bụ franjipani, iud, hibiscus, irimone (jasmine), eaquañeiy (sitere na osisi tomano), emet na mgbịrịgba odo.
Ndị Nauru na -eri ụdị nri mmiri dị iche iche mana azụ ka bụ nri kacha amasị ndị Nauru - raw, Fikiere, sie.
Enweghị ikpe COVID-19 ama ama na Nauru, enweghị akụkọ a gwara Healthtù Ahụ Ike Worldwa, mana Gọọmentị US na-atụ aro maka nwa amaala ya na ọnọdụ a amabeghị dị ize ndụ, ọbụlagodi ndị njem ọgwụ mgbochi.
Enwere ule PCR na/ma ọ bụ antigen dị na Nauru, nsonaazụ a pụrụ ịdabere na ya n'ime awa 72.
Ọgwụ Oxford-Astra Zeneca dị na obodo a
Nauru nwere akụkọ mba:
N'otu oge, enwere otu nwoke akpọrọ Denunengawongo. Ya na nwunye ya, Eiduwongo bi n'okpuru osimiri. Ha mụrụ nwa nwoke aha ya bụ Madaradar. Otu ụbọchị, nna ya kpọgara ya n'elu mmiri. N'ebe ahụ ọ na -awagharị ruo mgbe ọ rutere n'ikpere mmiri nke agwaetiti, ebe ọ hụrụ otu nwa agbọghọ mara mma aha ya bụ Eigeruguba.
Eigeruguba kpọgara ya ụlọ, ma emechaa ha abụọ lụrụ. Ha mụrụ ụmụ nwoke anọ. Akpọrọ nke okenye Aduwgugina, nke abụọ Duwario, nke atọ Aduwarage na nke nta bụ Aduwogonogon. Mgbe ụmụ nwoke ndị a tolitere ka ha bụrụ nwoke, ha ghọrọ nnukwu ndị ọkụ azụ. Mgbe ha ghọrọ ụmụ nwoke, ha bipụrụ iche na nne na nna ha. Ka ọtụtụ afọ gachara, mgbe nne na nna ha merela agadi, nne ha mụrụ nwa nwoke ọzọ. A kpọrọ ya Detora. Ka ọ na -etolite, ọ na -enwe mmasị ịnọnyere nne na nna ya wee nụ akụkọ akụkọ ha kwuru. Otu ụbọchị, mgbe ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ dimkpa, ọ na -apụ apụ ma hụ ụgbọ epeepe. O we biakute ha, ha we nye Ya ufọdu nime azù ntà ha. Enye ama emen iyak ọnyọn̄ ọkọnọ mmọ. N'echi ya, o mere otu ihe ahụ mana, n'ụbọchị nke atọ, nne na nna ya gwara ya ka ya na ụmụnne ya gaa azụ ịkụ azụ. Ya mere, ọ banyere ha n'ụgbọ ha. Mgbe ha lọtara n'uhuruchi ahụ, ụmụnna nyere Detora naanị obere azụ. Ya mere, Detora gara n'ụlọ kọọrọ nna ya maka ya. Mgbe ahụ nna ya kụziiri ya otú e si egbu azụ, ma kọọrọ ya banyere nne na nna ya ochie, ndị bi n'okpuru oké osimiri. Ọ gwara ya na, oge ọ bụla ahịrị ya rapara, na ọ ga -agbada maka ya. Mgbe ọ bịara n'ụlọ nne na nna ya ochie, ọ ga -abata rịọ nna nna ya ka o nye ya nko ndị o nwere n'ọnụ ya; ọ ga -ajụkwa nko ọ bụla ọzọ e nyere ya.
N'echi ya, Detora tetara n'isi ụtụtụ wee gakwuru ụmụnne ya. Ha nyere ya eriri azụ nke nwere ọtụtụ eriri na ya na mkpanaka kwụ ọtọ maka nko. Mgbe ha nọ n'oké osimiri, ha niile tụbara eriri ha, mgbe mgbe, ụmụnna na -ejide azụ; mana Detora ejideghị ihe ọ bụla. N'ikpeazụ, ike gwụrụ ya, eriri ya wee banye n'oké osimiri. Ọ gwara ụmụnne ya banyere ya, mana ha jiri ya mere ihe ọchị. N'ikpeazụ, ọ mikpuru n'ime mmiri. Ka ọ na -eme nke a, ha gwara onwe ha sị, 'Ọ bụ onye nzuzu, nwanne anyị nwoke a!' Mgbe ọ banyere n'ime mmiri, Detora rutere n'ụlọ nne na nna ya ochie. O juru ha anya ịhụ nwata nwoke dị otú ahụ ka ọ na -abịa n'ụlọ ha.
'Onye ka ị bụ?' ka ha jụrụ. 'Abụ m Detora, nwa Madaradar na Eigeruguba'. Mgbe ha nụrụ aha nne na nna ya, ha nabatara ya. Ha jụrụ ya ọtụtụ ajụjụ, gosi ya nnukwu obiọma. N'ikpeazụ, ka ọ na -achọ ịla, na -echeta ihe nna ya gwara ya, ọ rịọrọ nna nna ya ka o nye ya nko. Nna nna ya gwara ya ka ọ were nko ọ bụla masịrị ya n'elu ụlọ.
Nauru enweghị COVID. Ụgbọ elu otu izu n'etiti Nauru na Brisbane, Australia na -aga n'ihu na -arụ ọrụ. Ndị njem niile na Nauru chọrọ nkwado tupu gọọmentị Nauru.
Ndị nwoke Damo tụbara n'ahịrị ha ọzọ, na nke ugbu a ha jidere ụdị azụ dị iche. 'Gịnị bụ aha onye a?' ka ha jụrụ. Detora wee zaa, 'Eapae!' Ọzọ aha bụ nke ziri ezi. Nke a were ndị ọkụ azụ Damo iwe. Iberibe Detora tụrụ ya n'anya nke ukwuu maka amamihe ya. Detora tụpụrụ eriri ya ugbu a wee dọpụta azụ. Ọ jụrụ ndị nwoke Damo aha ya. Ha zara ya 'Irum' mana mgbe ha lere anya ọzọ, ha chọpụtara na ha ezighi ezi, n'ihi na enwere eriri ojii na njedebe ahịrị. Detora tụbara n'ahịrị ya ọzọ wee rịọ ha ka ha kpọọ azụ azụ. 'Eapae,' ka ha zara. Mana mgbe ha lere anya, ha hụrụ nkata anụ ezi na njedebe ahịrị Detora.
Ka ọ dị ugbu a, ụjọ tụrụ ndị ikom Damo, n'ihi na ha ghọtara na Detora na -eme anwansi.
A dọtara ụgbọ mmiri Detora n'akụkụ nke ọzọ, ya na ụmụnne ya gburu ndị Damo wee were ngwa azụ azụ ha niile. Mgbe ndị mmadụ nọ n'ikpere mmiri hụrụ ihe a niile, ha mara na e meriela ndị nwoke ha na asọmpi ịkụ azụ, n'ihi na ọ bụ omenala n'oge ahụ ka ndị meriri n'asọkụ ịkụ azụ dị otu a gbuo ndị na -emegide ha ma were ngwa azụ. Ya mere, ha zipụrụ ụgbọ epeepe ọzọ. Otu ihe ahụ mere dịka ọ dị na mbụ, ndị obodo Damo tụrụ egwu nke ukwuu wee si n'ụsọ osimiri gbapụ. Mgbe ahụ, Detora na ụmụnne ya dọkpụrụ ụgbọ ha gaa n'ikpere mmiri. Mgbe ha rutere n'ọdọ mmiri ahụ, Detora tụbara ụgbọ ya na ụmụnne ya anọ n'okpuru; ụgbọ epeepe ahụ ghọrọ nkume. Detora rutere naanị ya n'àgwàetiti ahụ. N'oge na -adịghị anya, ọ zutere otu nwoke nke gbara ya aka ịsọ mpi n'ịkụ azụ na azụ na azụ mmiri. Ha hụrụ otu wee malite ịchụ ya. Detora nwere ihe ịga nke ọma ijide ya, wee gbuo nwoke nke ọzọ wee pụọ. N'ebe dị anya n'akụkụ osimiri, Detora meriri asọmpi ahụ, wee gbuo onye na -ama ya aka.
Detora gawara ugbu a inyocha agwaetiti ahụ. N'ịbụ onye agụụ gụrụ, ọ rịgooro n'elu osisi aki oyibo wee tụda mkpụrụ osisi chara acha, mmiri ara ehi ọ rankụrụ. O ji mkpisi akị oyibo mee ọkụ atọ. Mgbe ọkụ na -enwu nke ọma, ọ wụsara anụ aki oyibo, nke a na -esi ísì ụtọ. Ekem enye osụhọde ana ke ntan ke ebiet emi oyomde usụn̄ ọkpọn̄ ikan̄. Ọ fọrọ nke nta ka ọ na -ehi ụra mgbe ọ hụrụ ka isi awọ na -abịaru nso n'ọkụ. O riri aki oyibo site n'ọkụ abụọ mbụ na, ka ọ na -achọ iri aki oyibo n'ọkụ nke atọ, Detora jidere ya na -achọ igbu ya. Mana obere òké ahụ rịọrọ Detora ka ọ ghara igbu ya. 'Biko, hapụ m ka m gaa, aga m agwa gị ihe ọ bụla' ka o kwuru. Detora wepụtara òké ahụ, nke malitere ịgba ọsọ na -emezughị nkwa ya. Detora jidere òké ahụ ọzọ ọzọ, were obere mkpanaka dị nkọ, na -eyi ya egwu na ọ ga -eji anya òké ahụpuo ya. Oke wee tụọ egwu wee sị, 'Tụpụnụ obere okwute ahụ n'elu nnukwu okwute ahụ wee hụ ihe ị hụrụ'. Detora kwarapụrụ okwute ahụ wee chọta ebe na -aga n'okpuru ala. Mgbe ọ banyere n'ime oghere ahụ, ọ gafere n'ụzọ dị warara ruo mgbe ọ bịarutere n'okporo ụzọ ya na ndị mmadụ na -aga n'ihu.
Detora enweghị ike ịghọta asụsụ ha na -asụ. N'ikpeazụ, ọ hụrụ nwa okorobịa na -asụ asụsụ ya, Detora wee kọọrọ ya akụkọ ya. Nwa okorobịa ahụ dọrọ ya aka na ntị megide ọtụtụ ihe egwu nke ala ọhụrụ ahụ, wee duzie ya n'ụzọ ya. Detora bịara n'ikpeazụ ebe ọ hụrụ ikpo okwu nke e ji ezigbo ute kpuchie nke mara mma. N'elu ikpo okwu ka Queen Louse nọ, ya na ndị na -ejere ya ozi gbara ya gburugburu.
Nwanyị nwanyị nabatara Detora, wee hụ ya n'anya. Mgbe, ka izu ole na ole gachara, Detora chọrọ ịlaghachi n'ụlọ, Louse-Queen agaghị ekwe ka ọ pụọ. Mana, n'ikpeazụ, mgbe ọ gwara ya ụmụnne ya anọ n'okpuru okwute nke enweghị ike ịtọhapụ ya ma e wezụga anwansi anwansi ya, o kwere ka ọ gaa n'ihu. Ọtụtụ ndị ọ zutere chọrọ ime onye ọbịbịa ahụ ihe ọjọọ, mana Detora ji anwansi merie ha niile.
Nke ikpeazu ha rutere n'oké nkume ebe Detora hapụrụ ụmụnne ya. Ọ hulatara ala, megharịa anwansi, nnukwu nkume ahụ wee ghọọ ụgbọ epeepe nwere ụmụnne ya anọ. Ụmụnna gbakọrọ aka mee njem maka ala nke ha.
Mgbe ha nọsịrị ọtụtụ ụbọchị n'oké osimiri, ha hụrụ agwaetiti nke ha n'ebe dị anya. Ka ha na -abịaru ya nso, Detora gwara ụmụnna na ya ga -ahapụ ha wee gbada ka ya na nne na nna ha ochie biri na ala nke oké osimiri. Ha nwara ịrata ya ka ọ nọnyere ha, mana ọ wụpụrụ n'akụkụ ụgbọ epeepe ahụ, wee gbadaa. Ụmụnna ahụ gakwuuru nne na nna ha wee kọọ akụkọ ihe mere ha.
Mgbe Detora rutere n'ụlọ nne na nna ya ochie, ha nabatara ya nke ọma. Mgbe nne na nna ochie nwụrụ, Detora ghọrọ eze Oké Osimiri na nnukwu mmụọ nke ịkụ azụ na ndị ọkụ azụ. Ma ugbu a, mgbe ọ bụla ahịrị fọk ma ọ bụ nko na -efunahụ n'ụgbọ epeepe, a na -amata na ha dina n'elu ụlọ Detora.